Waxqabadka Wasaarada Macdanta,Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee bilihii ugu dambeeyey
Biyo dhaaminta loo sameeyey degaanada G/Jubada Hoose.
Wasaaraddu waxey biya dhaamin u sameyasay tuulada Cabdulle Biroole oo Kismaayo u jirta 50km mudo 3 bilood ah. biyo dhaamintaas oo ay ka faa’iideysteen 500 oo qoys. Waxaa biyo dhaamintaas iska kaashadda Wasaaradda MTB iyo Hay’adda IOM, Sidoo kale Wasaaraddu waxey Ceel biyood Riig ah u dalabtay tuulada Cabdulle Biroole dalabkaas oo la aqbalay, lana rajeynayo mardhow in laqodo Ceel kaas.
Wasaaraddu waxey ka hergalisay Magaaladda Kismaayo Ceelel gacameed oo ay ka faa’iideysanayaan shacabka ku nool Xerooyinka Qoxootiga iyo xaafaddaha magaaladda,qodista Ceelashaan waxaa iska kaashaday Wasaarada MTB iyo Hay’addaha kala ah ARC, Mercy corps, Ceelashaan oo la daboolayo afkooda si qashinka iyo wasakhda looga ilaaliyo.
Wasaaraddu waxey Ceel biyood Riig ah ka hergalisay Xarunta qoxootiga Cusub ee ka imaanaya Xeradda Dhaadhaab waxaa iska kaashadday qodista Ceelkan Wasaaradda MTB iyo IOM.
Wasaaradda ayaa hergalisay qodista 2 Ceel oo solar ah oo ay ka qodeyso Xeradda qoxootiga ee Dalxiiska iyo 10 Ceel oo jigjigla ah. Fulinta howshan waxaa iska kaashaday Wasaaradda MTB iyo Hay’adda SGJ.
Wasaaraddu waxey kulamo bila ah la yeelataa Hay’addaha ka shaqeeya Wash aid si loogu tilmaamo meelaha ay biya la,aanta ka jirto loona ogaado shaqooyinka ay qabanayaan,loona yareeyo halmeel oo dhowr shaqo oo isku mid ah laga qabanayo .
Wasaaraddu waxey shaqa abuuris u sameysay Shacabka ku nool Magaalooyinka Raaskeybooni iyo Buurgaabo, gaar ahaan qodista Waraha iyo dabista Shinida. arintaa oo wax weyn ku soo kordhisay Deegaanka ka dib markii dadku ay heleen nolol maalmeed iyo cilmi ay ku dab taan shinida oo ka mid ah kheyraadka Allah nagu maneystay. Mashruucan waxaa wada fulinaayey Wasaraad MTB iyo Hay’adda ICRAF ee ka diiwaan kashan dalka Kenya.
Wasaaraddu waxey biyo dhaamin kasameysa tuulada Kudhaa ee ka tirsan Degmada Badhaadhe, biyo dhaamintan oo soconeysay mudo 2bilood ah, Waxaa iska kaashaday Wasaaradda iyo Hay’adda intersom. biyo dhaamintan oo ka faa’iideysanayaan dadka degan deegaanadaas.
Wasaaradu waxey biyo dhaamis u sameysay Degaanada hoos yimaada degmada Afmadow oo ah ilaa 20 Tuulo. Fulinta shaqadan waxaa iska kaashadey Wasaaradda MTB iyo Hay’adda ARC.
Wasaaraddu ayaa Ceel biyood ka hergalisay Magaaladda Afmadow gaar ahaan Xeradda ay dagan yihiin qoxootiga laga soo raray Xeradda Dhaadhaab ee dalka Kenya waxaana iska kaashaday Wasaaradda MTB iyo Hay’aadda IOM.
Shirkii 1aad oo dhaxmar Wasaaradda MTB ee Dowlad Gobaleedka Jubaland iyo AFDB,DFS,IOM
Warbixin shirkii kadhacay Caasimadda Nairobi gaar ahaan xarunta African Development Bank.
shirkan oo socday august 17-18-2016 waxaa looga hadlay arimo badan gaara ahaan arimaha Biyaha waxaana kasoo qeybgalay madax kala duwan oo ka kala socotay DFS iyo Shanta maalmul goboleed. waxaa kaloo kasoo qeybgalay madax ka kala socotay Hay’adda IOM iyo African Development Bank.
Arimaha looga hadlay shirkan waxaa ka mid ahaa in lagatashto qaabka ugu fudud oo wax looga qaban karo horumarinta Biyaha iyo kahortaga Caafimaad darada ay keenaan Biyaha, sidoo kale sidii kor loogu qaadi lahaa Wasaaraddaha Biyaha iyo Tamarta ka shaqeeyo sida Wasaaradda Biyaha iyo Tamarta DFS iyo Dowlad Gobaleedyadda. Wasaaraddahan oo kahadlay baahiyaha ugu daran oo hada laga caawin karo iyadoo lagu xisaabtamaya Dhaqaalaha laheli karo.
Wasiirka Wasaaradda Macdanta, Biyaha iyo Tamarta Dowlada Gobaleedka waxuu gudbiyay arimahaan.
Dhismaha Xarunta Wasaaradda.
Qalabeynta Xafiisyada Wasaaradda.
Lataliyaasha wasaaradda oo Mushahaar naloosiiyo, ilaa sadax lataliyaal ee ka shaqeeya wasaaradda Macdanta,Biyaha iyoTamarta,
In nalaga caawiyo Gawaari Wasaaradda u shaqeyneyso
In nagala Caawiyo Sheybaarka Biyaha lagu baaro.
In nalaga caawiyo Riigagii Ceelasha lagu qodi lahaa
In nalaga caawiyo tababarka shaqaalaha wasaaradda.
Waxaan u sheegnay in Wasaaradda hada ay shaqaalo 20 kakooban oo folontaari ku shaqeeyo ay jiraan oon u baahanahay in aan mishaaraad u helno.
Waxaan u sheegnay in ay jirto biyo la,aan badan baadiyaha iyo Magaaladaba gaar ahaan magaalada kismaayo in gudeheeda aan laga helin ceel biya macaan ah,iyo in ugu yaraan biyaha laga keeno 30 KM.
In naloo qodo ceelal magaalooyinka iyo Baadiyahaba.
In biyaha naloo sifeeyo Bada, Wabiga iyo Ceelashaba.
Waxaan gudbinay arimahan iyo arimo badan waxey noshegen in ay naga caawin doonan arimahan
In ay noo dhisi doonaan qeyb ka mid aha dhismaha Wasaaradda.
In ay Guno noosiin doonaan 7 qof, oo kala ah 2 lataliyaal iyo 5 shaqaalo hoosaad ah.
In ay noo qalabeen doonaan qeyb ka mid ah xafiisyada wasaarada.
In ay shaqaalaha wasaarada tababar noosiin doonaan.
In ay hal gaari oo bikaab ah noo gadi doonaan.
In labo meelood ay kasameyn doonaan biyo soosaaris,oo aan islagaranay Goobweyn iyo Doolow .
In labo magaalo ay nooga dayac tiridoonaan 2 Ceel oo rig ah,waxaana islagaranay in labadaas meelood ay noqon doonaan Degmada Afmadow iyo Daarasalaam oo ka mid ah gobolka Gedo.
In ay noo gadi doonaan Sheybaar.
Shirkii ugu dambeeyay oo uu wasiirka ka qeyb galay iyo arimaha looga hadaly.
Shirarkii ugu dambeeyay wasiirka wasaaradda Macdanta, Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha waxuu kulan lasoo yeeshay wasaarada Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee DFS, AFDB, IOM iyo Wasaaraddaha Biyaha Dawlad Gobalaeedyadda.shirarkii ugu dambeeyay waxuu qabsoomay Taariikhda markey aheyd 16-3-2017 waxaana hoosta laga xariiqay fulinta dhoor arimood oo kala ah dayactirka dhoor Ceel oo Riiga ah,Dhisida Xarumaha Wasaaradaha kheyraadka Biyaha, Qalabeynta Wasaaradda, gadida Wasaaradda Gaarigey Ku shaqeyn laheyd, Guna siinta Dhoor shaqaalaha ka mid ah. Arimahan iyo arimo kale ayaa laga hadlay. Qeybta ugu horeysana waxaa labilaabi doonaa dhamaadka bishaan March iyadoo laga bilaabayo dayactirka Ceelasha Riiga ah maadaamaa abaaro ay jiraan, waxaana laqiimeyn doonaa deegaanada ay biyo la’aanta badan ka jiraan. Sidoo kale waxaa imaan doona koox sameynaya qiimeyntaas oo laba dhinac u shaqeyn doono, dhanka qiimeynta Biyaha iyo Cabiraada dhulka laga rabo Xarunta Wasaaradda loo dhisi doono . Mashruucan waxaa si toos ah u wada fulinaya AFDG, IOM DFS. Iyo Dawlad Gobaleedyada. Dhaqaalaha guud ee mashruucan loogu talagalay waa 11million, 6da bilood ee ugu horeysana waxaa la ogolaaday 2Million oo ka dhaxeysa dhamaan DFS iyo Dawlad Gobaleedyada, marka horena waxaa xoogga lasaari doonaa Dayactirka Ceelasha Riiga ah 3 Ceel, Dowlad Goboleed kasta. Waxaana imaan doono koox sahmin doona magaalooyinka ugu baahida badan dhanka biyaha, waxaana koox daas qeyb ka ah Wasaaradda.
Waxaa dayactirka xigi doono Dhisida Xarunta Wasaaradda, Tawabarka Shaqaalaha,hal gaari oo Wasaaradda loogu shaqeeyo. Qalabeenta Xafiisyada. Sheybaarka Biyaha, iyo arimihii aan codsanay intii nagala aqbalay.